ငါးလုံးလေးများပြုလုပ်သည်, လူအများစုကရွေးကြလိမ့်မည် ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်ကြိတ်. ရေပေါ်မျောနေသောငါးအစာသည်လုံးလေးများကိုငါးများမှတစ်ဆင့်စားရန်မလွယ်ကူပါ. ဤအတောအတွင်း, ၎င်းသည်ငါးအစာ၏လေထုညစ်ညမ်းမှုကိုကန့်သတ်နိုင်သည်. ရေပေါ်ငါးအစာတောင့်သည်အပူချိန်အလွန်နည်းသောအောက်စီဂျင်ပုံစံဖြင့်မာနေသည်, ထို့ကြောင့်ငါးများကိုအစာကြေရန်အလွယ်တကူကုသနိုင်သည်. ဤကဲ့သို့ကြိတ်ခွဲစက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ငါးအစာတောင့်ထုတ်ကုန်အဖြစ်ခေါ်ကြသည်, သို့သော်, ထို့အပြင်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်နှင့်မတူကွဲပြားသောကန့်များကိုကျွေးမွေးရန်အတွက်ပြုလုပ်သောအတောင့်များကိုတောင့်များဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်. ကျန်ရှိသောလုံးလေးများ၏အချင်းသည်သင်လိုချင်သည့်အတိုင်း 0.9-10mm ဖြစ်နိုင်သည်. ဒါဟာကြောမျိုးသို့မဟုတ်နစ်မြုပ်အမျိုးအစားရှိနိုင်ပါသည်. အဆိုပါ uncooked တ္ထုများတွင်ဓာတ်၏အချိုးအစားထက်အများကြီးလျော့နည်းသည်ဆိုပါက 35%, ထို့နောက်လုံးလေးများရေထဲကျသွားလိမ့်မည်.
ဒီဇယ်အင်ဂျင် ငါးအစာကျွေးခြင်း extruder ဒီဇယ်အင်ဂျင်ဖြင့်မောင်းနှင်ပြီးဒီအခြေခံပေါ်မှာလည်ပတ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံသည် ၀.၉-၁၅mmmm aperture ဖြင့်သေဆုံးသောပြားအမျိုးမျိုးကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။, အရာထက်ပို extrude နိုင်ပါတယ် 30 ဘုံ feed ကိုလုံးလေးများ. အဆိုပါစွမ်းရည်ကနေဖြစ်ပါတယ် 30 တစ်နာရီနှစ်တန်မှကီလိုဂရမ် / နာရီ. ဖြည့်စွက်ကာ, ငါတို့သည်လည်းသေပန်းကန်၏အကောင်းဆုံးချုံ့အချိုးသည်, သင်လုပ်တဲ့အမှုန်တစ်ခုစီကချောချောမွေ့မွေ့ဖြစ်စေတယ်, ယူနီဖောင်းနှင့်တောက်ပ. ဒီဒီဇယ်အင်ဂျင်၏ငါးအစာဖြူထုတ်စက်၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာဒီဇိုင်းသည်သိပ္ပံနှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်, သေးငယ်တဲ့ကြမ်းပြင်andရိယာနှင့်အနိမ့်ဆူညံသံနှင့်အတူ, မြင့်မားသော output ကိုနှင့်အနိမ့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု. အမှုန်များ၏ပုံသွင်းနှုန်းသည်မြင့်မားပြီးမျက်နှာပြင်တောက်ပ။ သန့်ရှင်းသည်, အရာသိုလှောင်မှုနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဘို့ကောင်းပါတယ်. ဒီပစ္စည်းကိရိယာများ၏လည်ပတ်မှုနှင့်ထိန်းသိမ်းမှုသည်ရိုးရှင်းပါသည်, လုံခြုံစိတ်ချရမှုနှင့်အသေးစားနှင့်အလတ်စားငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ငါးအစာထုတ်လုပ်သည့်စက်ရုံများကပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်. ၎င်းသည်အမျိုးမျိုးသောစပါးပစ္စည်းများအားငါးများအတွက်အဆင့်မြင့်ရေနေအဏ္ဏဝါအစာကျွေးခြင်းများတွင်အသုံးပြုသည်, ခွေး, လိပ်, ဖား, ပုစွန်နှင့်ကဏန်း, စသည်တို့. ငါးအစာဖြန့်စက်တွင်မတူညီသောသေမှိုများရှိသည်, ဒါကြောင့်လုံးလေးအရွယ်အစားသည်သင်၏ထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်ချက်နှင့်အညီချိန်ညှိနိုင်သည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်အကြီးစားငါးမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းနှင့်ငါးအစာထုတ်လုပ်မှုနှင့်ကိုက်ညီသည့်ဒီဇယ်အင်ဂျင်ငါးအစာစက်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးသည်.
1. အပူချိန်: အဆိုပါ extruder ဝင်ပြီးနောက်, ပစ္စည်းကိုပထမ ဦး ဆုံးတင်းမာရပါမည်. ဒါဟာဒီဇယ်အင်ဂျင်ငါးအစာကျွေးစက်၏ tempering ဖြစ်စဉ်ကိုဆင်တူသည်, အရာနှစ်မျိုးလုံးစိုထိုင်းဆနှင့်ပစ္စည်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်. မီးငြိမ်းသတ်ခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာအပူချိန်နှင့်စိုထိုင်းဆကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်နောက်ဆက်တွဲတူးထုတ်စဉ်ကာလအတွင်းပစ္စည်းလျင်မြန်စွာမှည့်လာစေရန်ဖြစ်သည်။.
2. မင်္ဂလာပါ: tempering ပြီးနောက်, ပစ္စည်းဝက်အူပေါ်ကို extrusion လိုင်သို့ရ, extrusion အခန်း၏ပုံသဏ္theာန်ပစ္စည်း၏ညှနျကွားတလျှောက်တွင်တဖြည်းဖြည်းသေးငယ်သည်. ပစ္စည်းများ၏ဖိအားလှုပ်ရှားမှုကာလအတွင်းတိုးပွားလာနေသည်, အားကြီးသောညှပ်ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည့်ဝက်အူပေါ်ကို extrusion လိုင်အတွက်ပစ္စည်းနေစဉ်, kneading နှင့်ပွတ်တိုက်, ပစ္စည်းများ၏အပူချိန်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်.
3. ရောင်: ပစ္စည်းသည့်အခါဝက်အူပေါ်ကို extrusion လိုင်၏ထွက်ပေါက်ရောက်ရှိသည့်အခါ, ဖိအားအကြီးဆုံးဖြစ်ပါတယ်. extrusion အခန်းထဲထုတ်ညှစ်ပြီးနောက်, ဖိအားရုတ်တရက်ပျောက်ကွယ်သွားသည်, နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာ, အပူနှင့်အစိုဓာတ်လျင်မြန်စွာဆုံးရှုံး, သောပစ္စည်းလျင်မြန်စွာတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်တိုးချဲ့၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုမှန်ကန်စေသည်.
4. ဖြတ်တောက်ခြင်း: ၎င်းကိုသတ်မှတ်ထားသောအရှည်အထိစုဆောင်းသောအခါ extruded ပစ္စည်းကိုလိုအပ်သောအရွယ်သို့ဖြတ်သည်.
1.၎င်းသည်လျှပ်စစ်ပြတ်လပ်မှုနှင့်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပြတ်လပ်မှုပြstableနာကိုဖြေရှင်းပေးသည်, နှင့်သုံးအဆင့်ပါဝါကိုမသုံးပါ, ဒါပေမယ့် output ကိုလိုအပ်ပါသည်.
2.၀.၃-၁၅ မီလီမီတာ aperture ဖြင့်သေဆုံးနေသောအပြားအမျိုးမျိုး, အရာထက်ပို extrude နိုင်ပါတယ် 30 ဘုံ feed ကိုလုံးလေးများ.
3. ကြိမ်နှုန်းထိန်းချုပ်မှုစနစ်တိုးတက်လာသည်, ဒီစနစ်နှင့်အတူ, အမြန်နှုန်းပြောင်းလဲခြင်းဖြင့်ကွဲပြားခြားနားသောအရွယ်အစားလုံးလေးများထုတ်လုပ်နိုင်သည်.
4. ရှိပါတယ်4အားလုံးအရွယ်အစားလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်တွေ့ဆုံရန်မှိုမျိုး. သူတို့ကအလွယ်တကူထုတ်ယူနှင့်ပြောင်းလဲသွားကြသည်.
5.အဆိုပါအားပြိုင်မှုဘွိုင်လာနှင့်အတူချိတ်ဆက်နေသည်, ပစ္စည်းများလုံးဝ Pre-steamed နိုင်ပါသည်, ဒါကြောင့်လုံးလေးများ၏အရည်အသွေးနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုသိသာထင်ရှားစေသည်.
6. တည်ငြိမ်သောလုပ်ဆောင်ချက်များကို, ဒါကြောင့်စဉ်ဆက်မပြတ်အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်.